Забур 138 CARS - Nnwom 138 ASCB
1Ao Awurade, mɛfiri mʼakoma nyinaa mu ayi wo ayɛ;
mɛto wʼayɛyie dwom wɔ anyame no anim.
2Mede mʼani bɛkyerɛ wʼasɔredan kronkron no, akoto wo
wɔ wʼadɔeɛ ne wo nokorɛdie enti
ɛfiri sɛ wɔapagya wo din ne wʼasɛm no
asene nneɛma nyinaa.
3Ɛberɛ a mesu mefrɛɛ wo no, wogyee me so;
womaa me nyaa akokoɔduru ne nnamyɛ.
4Ao Awurade, sɛ ahemfo a ɛwɔ ewiase nyinaa te wʼanomu asɛm a
ma wɔn nkamfo wo.
na Awurade animuonyam yɛ kɛseɛ.
6Ɛwom sɛ Awurade wɔ ɔsorosoro deɛ, nanso ɔhwɛ mmɔborɔfoɔ,
na ahantanfoɔ deɛ, ɔhunu wɔn akyirikyiri.
7Ɛwom sɛ menam ɔhaw mu deɛ,
wotene wo nsa wɔ mʼatamfoɔ abufuo so,
8Awurade bɛma deɛ wahyehyɛ ama me no aba mu;
Ao Awurade, wʼadɔeɛ wɔ hɔ daa,
nnyaa wo nsa ano adwuma hɔ.
ASCB : Nnwom 138